6 goobood oo dabiici ah oo la booqan doono Noofambar | Bezzia
6 goobood oo dabiici ah oo la booqdo bisha Nofembar
Maria vazquez | 29/09/2021 10:00 | Waqtiyada firaaqada, safarka
Wakhti kasta oo sannadka ah ayaa wanaagsan in la booqdo goobaha dabiiciga ah ee aan maanta soo jeedinno, laakiin kuwan waxay helaan sixir gaar ah xilliga dayrta. Ama midabka ay caleemaha geedaha helaan ama sida ay durdurrada biyuhu u koraan, Oktoobar iyo Noofembar ayaa loo soo bandhigaa inay yihiin bilaha ugu wanaagsan baxsasho ama dalxiis ku xidhan meelahaas. Laakiin maxay yihiin?
1 Castañar oo ka socda El Tiemblo
3 Beerta dabiiciga ah ee aagga fulkaanaha ee La Garrotxa
4 Wadada geedaha saytuunka ee Martos ee boqol sano jirsaday
6 Dooxada Ambroz
Castañar oo ka socda El Tiemblo
Qaab -dhismeedka El Castañar de el Tiemblo meeshan waxay kuu oggolaaneysaa inaad sahamiso oo aad ogaato mid ah kaymaha ugu quruxda badan uguna gaarka ah laga bilaabo Valle del Alberche iyo Tierra de Pinares ee Castilla y León. Waxay ku taal meel 90 kiiloomitir u jirta Madrid, waxay noqonaysaa beddel weyn oo dalxiis. Si aad u badan oo sannadaha qaarkood xayiraado loo hirgeliyey si looga fogaado xad -dhaafka bilaha Oktoobar iyo Nofembar.
Xilliga ka baxsan, midabka goobtan dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inaysan ahayn mid aad u yaab badan laakiin weli waa meel laga gooyo magaalada. Waxaad ka heli kartaa waddooyin kala duwan oo ku wareegsan meeshan si aad ugu raaxaysato keligaa ama qoyskaaga, si kastaba ha ahaatee, geedka xabadka ee El Tiemblo ayaa ugu caansan. Waa mid 4,4 kiilomitir oo wareeg ah taasi waxay ka bilaabmaysaa aagga madadaalada ee El Regajo waxayna aadeysaa dhanka geedka xabadka loo yaqaan 'El abuelo', oo ah geed sanduuq qarnigii boqol sano jirsaday, in ka badan 500 sano jiray. Waddadu waxay ku dhowdahay mid fidsan waxaana lagu tilmaamaa mid sahlan, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon in lala safro carruurta ama dadka dhaqdhaqaaqoodu xaddidan yahay.
Beerta Dabiiciga ah ee Cañón del Río Lobos waa a aagga dabiiciga ah ee la ilaaliyo ee Castilla y León. Waxay dabooshaa aag ka badan 10.000 hektar oo u dhexeeya gobollada Burgos iyo Soria waxayna u taagan tahay muuqaalkeeda cajiibka ah ee lagu sawiray waqti dheer biyaha Wabiga Lobos, quruxda quruxda badan ee Templar ee San Bartolomé, iyo gumeysiga muhiimka ah ee griffon haadleyda.
Beerta dabiiciga ah waxaa ku yaal raadad kala duwan oo si fiican loo calaamadeeyay oo kuu oggolaanaya inaad ogaato qaab-dhismeedkeeda kala duwan iyo deegaanka. Sida ugu fudud oo la yaqaan waa kan u soco xayndaabka San Bartolomé. Laga soo bilaabo baarkinka baabuurta ee Valdecea waxaa jira ilaa 1000 mitir ilaa esplanade of hermitage, iyo si aad u sameyso wadadan waxaad haysataa laba ikhtiyaar. Waxaad raaci kartaa Waddada Wabiga, oo ay ku jirto inaad ka gudubto xoogaa yar oo dhib ah sida ka -tallaabidda webiga oo aad uga tallaabsato dhagaxa tallaabada, ama aad ku sii waddo jidka kaynta, socod lagu samayn karo xitaa kabo iyo baabuur -wadista carruurta.
Adiguba waad leedahay Waddooyin dhaadheer oo dhex mara Canyon gabi ahaanba. Midna ma soo bandhigo dhibaatooyin waaweyn oo ka baxsan baahida loo qabo in laga gudbo fuulitaanka dhaadheer ama looga gudbo Wabiga Chico, oo caadi ahaan qalalan laakiin caqabad ku noqon kara xilliga roobka. Sida hooska meelaha dabiiciga ah, marka hore la tashiga xaaladaha xarunta macluumaadka dalxiiska ee u dhiganta ayaa fure u ah in laga fogaado waxyaabaha la yaabka leh.
Beerta dabiiciga ah ee aagga fulkaanaha ee La Garrotxa
Ka kooban wax ka badan afartan koon oo foolkaanno ah iyo dhibco qulqulka qulqulaya, beertaani waxay leedahay qiimo dabiici ah oo weyn. Waxay ku taallaa gobolka Garrotxa, ee Girona, hab -qoraalka, ciidda iyo cimiladeeda waxay siisaa dhir kala duwan, oo inta badan aad u xamaasad badan, oo leh geedo qallafsan, geed iyo kaymo beech ah oo leh qiime muuqaal gaar ah.
Waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee dabiiciga ah ee dhammaan kuwa aan maanta soo jeedinno. Waxeey heesataa 25 socdaal oo dadka lugeeya dherer iyo dhib kala duwan oo soo mara meelaha ugu xiisaha badan Beerta Dabiiciga ah. Xadiiqadda dhexdeeda waxaad sidoo kale booqan kartaa xayndaabka ku dhex yaal fulkaanaha Santa Margarita, meel madxafka fulkaanaha Coscat ama magaaladii hore ee Sant Pau. Waxaad u baahan doontaa dhammaadka wiigga si aad u qaddariso guud ahaan.
Wadada geedaha saytuunka ee Martos ee boqol sano jirsaday
Geedka saytuunka ee Martos wuxuu ku yaal Jaén, oo ku taal degmada isla magacaas, oo ay hoy u tahay Dhagaxiisa, wuxuu siiyaa microclimate ugu habboon iyo carro aad u bacrin ah. In ka badan 20.000 hektar oo ka mid ah aaggeeda hoose waxaa ku guuleystay monoculture of geedka saytuunka iyo, gaar ahaan, quruxda muuqaalka leh ee ay geedo saytuun ah oo boqol jirsaday oo haybad leh.
Waddada geedaha saytuunka ee qarniga ah waxay dabooshaa aag dhan 84 hektar, oo leh 5.394 geedo guud ahaan, qaarkoodna, farshaxanno nool oo run ah. In ka badan 60% kuwani waxay ka weyn yihiin 200 sano, in kasta oo dhaqanka afka ahi muujiyey in geedo saytuunka ah Meesha Llano de Motril waxay jiraan in ka badan nus qarni.
Degaanku wuxuu ku yaal meel wax yar u jirta bartamaha magaalada Marte, oo ku xigta waddada isku xirta Martos iyo Santiago de Calatrava (J-213). Kiiloomitir 1,3 waxaad ka heli doontaa tilmaanta koowaad ee Geedaha Saytuunka ee Qarniga, isla marka aad dhaafto qaar ka mid ah dhismayaasha beeraha, waxaad ka heli doontaa tilmaanta labaad.
Xadka u dhexeeya Burgos iyo Dalka Basque waa biyo -dhaca ugu sarreeya ee gacanka: biyo -mareenka Nervión. Biyo -mareenkan weyn oo dhererkiisu yahay 270 mitir oo ku yaal aagga la ilaaliyo ee Monte de Santiago, waa muuqaal dabiici ah oo aynaan mar walba ku raaxaysan karin.
Quruxda Salto del Nervión waxay ku jirtaa biyaha laakiin kaliya wadar ahaan laba bilood sanadkii ayaa sidan oo kale uga fakari karnaa. Markaad dhex marayso dhul karst ah, had iyo jeer ma laha biyo tan iyo markii ay soo fiirsato oo ku qulquleyso qaybta hoose ee kanaalka Delica. Sidaa darteed ayaa lagula talinayaa Booqo kadib maalmo roobab mahiigaan ah, duufaan daran ama dhalaalid.
Waxaa jira saddex siyaabood oo lagu raaxaysan karo biyo -dhaca Nervión. Burgos ayaad ka heli kartaa inta ugu badan fudud oo ku habboon in lala sameeyo carruurta. Kaliya 2 km oo lug ah waxaad ku gaari doontaa aragtida cajiibka ah ee laga arki karo biyo -dhacan cajiibka ah oo soo ordaya. Waddo kale oo lagu arko biyo -mareenka Nervión ee dusheeda ayaa ah midka ka bilowda magaalada Untzaga ee gobolka Alava. Haddii waxa aad rabto inaad sameyso ay tahay jimicsi aad u yar oo aad ka fiirsato dhicitaanka Nervión iyo dhammaan kanaalka Delika ee cajiibka ah dhinac kale, tani waa waddada ugu habboon.
Dooxooyinka waqooyiga Cáceres, ee gobolka ku xeeran Hervás, waxaa la qabtaa dayr kasta inta u dhaxaysa Oktoobar iyo Diisambar Dayrta Magical, oo ah hindise ka dhigaya raaxaysiga ku raaxaysiga dabeecadda iyo soo jiidashada miyiga ee meeshu xitaa ka sii soo jiidasho badan. Sidaa darteed, waa mid ka mid ah deegaannada dabiiciga ah ee aan doorannay inaan booqano Nofeembar.
Dayrta sixirka Waxay ku siinaysaa inaad ku neefsato dayrta waddooyinka baaskiilka, socodka, waxqabadyada biyaha iyo tartamada buuraha, ku cusbooneysiiso dareenkaaga bandhigyo muusig oo aad ku soo ceshato dhadhankii hore ee shaybaarka caloosha. Dhawaan waxaad awoodi doontaa inaad la tashato dhammaan waxqabadyada websaydhka Dooxada Ambroz.
Miyaadan doonayn inaad u baxdo dalxiis ama aad u diyaariso meel ka baxsan miyiga mid ka mid ah goobahan dabiiciga ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » 6 goobood oo dabiici ah oo la booqdo bisha Nofembar
Sida looga fogaado kharashaadka lama filaanka ah ee dhaqaalaha gudaha
Furayaasha si aad uga faa'iideysato waqtiga firaaqada badan oo lammaane ahaan ah